Ceb နဲ့ Madara တို့ OG မှာပါဝငျလာမယျ့ WeSave! ပရဟိတ Dota2 ပွိုငျပှဲ – Gaming Noodle
Ceb နဲ့ Madara တို့ OG မှာပါဝငျလာမယျ့ WeSave! ပရဟိတ Dota2 ပွိုငျပှဲ
လှနျခဲ့တဲ့ ရကျပိုငျးက ကွညောခဲ့တဲ့ WePlay! က ကငျြးပတဲ့ WeSave! Charity Play ပွိုငျပှဲဟာ ယနေ့ စတငျကငျြးပမှာ ဖွဈပါတယျ။ Region6ခုက အသငျး (၄) သငျးစီ ပါဝငျကွမှာဖွဈပွီး ဆုကွေးဒျေါလာ ၁၂၀,၀၀၀ ပေးအပျမှာ ဖွဈပါတယျ။ Online ပှဲစဉျဖွဈတာကွောငျ့ Region တူတဲ့ အသငျးအ​ခငျြးခငျြးသာ ယှဉျပွိုငျကွမှာပါ။
ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ တိုကျဖကျြရေးအတှကျ ရနျပုံငှေ ရှာဖှဖေို့ တကမ်ဘာလုံးက အကောငျးဆုံးအသငျးတှေ ပါဝငျယှဉျပွိုငျကွတာ TI ၂ နှဈဆကျ ခနျြပီယံ OG လညျး အပါအဝငျပါပဲ။ လကျရှိသိထားရသလောကျ အသငျးအမြားစုဟာ ပုံမှနျ လူစာရငျးနဲ့ ယှဉျပွိုငျကွမှာ ဖွဈပမေယျ့လညျး OG ကတော့ လူစာရငျး ၂ ဦး အပွောငျးအလဲ လုပျထားတာကို တှရေ့ပါတယျ။
OG ဟာ သူတို့ရဲ့ Offlane နဲ့ Carry ဖွဈတဲ့ MidOne နဲ့ Topson တို့နရောမှာ ဝါရငျ့ Legend တဈဦးဖွဈတဲ့ ကစားသမား​ဟောငျး Ceb ရယျ ဒုတိယအသငျး OG Seed က Madara ရယျ ပါဝငျလာမှာ ဖွဈပါတယျ။ OG ဖကျက တရားဝငျ သတငျးမထုတျပွနျသေးပမေယျ့ WePlay! ရဲ့ Website က OG ကစားသမား စာရငျးမှာတော့ ပွောငျးလဲထားပါတယျ။
MidOne က တော့ ကိုရိုနာ ဗိုငျးရပျဈကိစ်စကွောငျ့ သူ့ရဲ့မှေးရပျမွေ မလေးရှားနိုငျငံကို ပွနျတာဖွဈနိုငျပွီး Topson ကတော့ သူရဲ့ ခဈြသူရှိရာ မလေးရှားကိုပဲ သှားရောကျ လညျပါတျနတေယျလို့ ယူဆရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ OG ပရိသတျတှအေတှကျတော့ Ceb ပါဝငျလာခွငျးဟာ အရာအားလုံးကို မလြေ့ော့စမှောပါ။
Topson with his gf Mawar Remy
ပွိုငျပှဲတှကေိုတော့ ယနညေ့ ၅:၃၀ မှာ GeekFam နဲ့ BOOM Eaports တို့က စတငျယှဉျပွိုငျမှာ ဖွဈပွီး OG ကတော့ မနကျဖွနျ စနနေေ့ ည ၁၁:၃၀ မှာ Team Liquid နဲ့ စတငျယှဉျပွိုငျရမှာပါ။ Esports အကွောငျးအရာမြားနဲ့ သတငျးမြားကို Gaming Noodle မှ အမွဲမပွတျ တငျဆကျပေးလကျြရှိပါတယျ။
Ceb နဲ့ Madara တို့ OG မှာပါဝင်လာမယ့် WeSave! ပရဟိတ Dota2 ပြိုင်ပွဲ
လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းက ကြေညာခဲ့တဲ့ WePlay! က ကျင်းပတဲ့ WeSave! Charity Play ပြိုင်ပွဲဟာ ယနေ့ စတင်ကျင်းပမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Region6ခုက အသင်း (၄) သင်းစီ ပါဝင်ကြမှာဖြစ်ပြီး ဆုကြေးဒေါ်လာ ၁၂၀,၀၀၀ ပေးအပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Online ပွဲစဉ်ဖြစ်တာကြောင့် Region တူတဲ့ အသင်းအ​ချင်းချင်းသာ ယှဉ်ပြိုင်ကြမှာပါ။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ရန်ပုံငွေ ရှာဖွေဖို့ တကမ္ဘာလုံးက အကောင်းဆုံးအသင်းတွေ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြတာ TI ၂ နှစ်ဆက် ချန်ပီယံ OG လည်း အပါအဝင်ပါပဲ။ လက်ရှိသိထားရသလောက် အသင်းအများစုဟာ ပုံမှန် လူစာရင်းနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ကြမှာ ဖြစ်ပေမယ့်လည်း OG ကတော့ လူစာရင်း ၂ ဦး အပြောင်းအလဲ လုပ်ထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။
OG ဟာ သူတို့ရဲ့ Offlane နဲ့ Carry ဖြစ်တဲ့ MidOne နဲ့ Topson တို့နေရာမှာ ဝါရင့် Legend တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကစားသမား​ဟောင်း Ceb ရယ် ဒုတိယအသင်း OG Seed က Madara ရယ် ပါဝင်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ OG ဖက်က တရားဝင် သတင်းမထုတ်ပြန်သေးပေမယ့် WePlay! ရဲ့ Website က OG ကစားသမား စာရင်းမှာတော့ ပြောင်းလဲထားပါတယ်။
MidOne က တော့ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်ကိစ္စကြောင့် သူ့ရဲ့မွေးရပ်မြေ မလေးရှားနိုင်ငံကို ပြန်တာဖြစ်နိုင်ပြီး Topson ကတော့ သူရဲ့ ချစ်သူရှိရာ မလေးရှားကိုပဲ သွားရောက် လည်ပါတ်နေတယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် OG ပရိသတ်တွေအတွက်တော့ Ceb ပါဝင်လာခြင်းဟာ အရာအားလုံးကို မေ့လျော့စေမှာပါ။
ပြိုင်ပွဲတွေကိုတော့ ယနေ့ည ၅:၃၀ မှာ GeekFam နဲ့ BOOM Eaports တို့က စတင်ယှဉ်ပြိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး OG ကတော့ မနက်ဖြန် စနေနေ့ ည ၁၁:၃၀ မှာ Team Liquid နဲ့ စတင်ယှဉ်ပြိုင်ရမှာပါ။ Esports အကြောင်းအရာများနဲ့ သတင်းများကို Gaming Noodle မှ အမြဲမပြတ် တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။